ENatyisiweyo Pure PTFE Bukanqinishe Thread Tape - China Yangzhong Luck Star ukutywina
ENatyisiweyo Pure PTFE Bukanqinishe Umsonto Tape
Desiccant Rotor Dehumidifier Seal
Kagesi uvalo nomthamo neeMpompo Seal
PTFE Imvulophu CNAF Lapjoint esisangqa gasket
Bushing Ukunikela Taper Lock
OEM Umsizi Igcwalisiwe PTFE Ring
No-umngxuma PTFE Imvulophu CNAF gasket
Inkcazo: 1.Expanded PTFE ngokudibeneyo sealant tape multi-injongo gasket tape ezenziwa 100% izinto fluorocarbon PTFE eyandisiweyo. 2.It olunikwe njenge eqhubekayo eliphantsi tape ezinoxinano kunye self-enamathelayo baxhaswa strip. 3.It ithambe kwaye nomsi-, ukuvumela ukuba baphile ngokulula kuzo zonke izitenxo kumphezulu kwaye compress ku iribhoni obhityileyo phantsi koxinzelelo. Yesicelo: Ukwandiswa PTFE ngokudibeneyo sealant tape kuyacetyiswa njenge tape gasket e ngentsimbi, iglasi-ngaphakathi, PVC nogwali fiberglass flanges, yimisi ...
1.Expanded PTFE ngokudibeneyo sealant tape multi-injongo gasket tape ezenziwa 100% izinto fluorocarbon PTFE eyandisiweyo.
2.It olunikwe njenge eqhubekayo eliphantsi tape ezinoxinano kunye self-enamathelayo baxhaswa strip.
3.It ithambe kwaye nomsi-, ukuvumela ukuba baphile ngokulula kuzo zonke izitenxo kumphezulu kwaye compress ku iribhoni obhityileyo phantsi koxinzelelo.
PTFE eYandisiweyo ngokudibeneyo sealant tape kuyacetyiswa njenge tape gasket e ngentsimbi, iglasi-ngaphakathi, PVC nogwali fiberglass flanges, yimisi imibhobho, ezineziciko eziphathekayo, kubananisi ubushushu, izitya zeplastiki iglasi ifayibha lwesamente, flanges impompo izindlu, flanges isitya umphunga, mgodi kunye mgodi elihambelana, amalungu yodongwe, umoya imibhobho, iinkqubo kubunzulu baphantsi komhlaba kunye womoya, iinkqubo kwamanzi kunye namatyala turbine.
ENatyisiweyo PTFE tape joint yenziwa kwi-100% PTFE, yinto egalelwe ezinokusetyenziswa kwizicelo ezininzi bume bako, ngaphandle zesinyithi etyhidiweyo kwealkali fluorine elemental. 24B akayi kungonakalisi eendaba kwaye isetyenziswe kwizicelo ukutya kunye nezixhobo neziyobisi.
Uhlobo Product: PTFE Expanded
Uhlobo Supply: Joint Sealant Tape
Material: 100% PTFE, ezithambileyo kunye luthambe kakhulu
Ubukhulu: 1mm ~ 7.0mm
Ububanzi: 3mm ~ 25m
Uluhlu ph: 0-14
Pressure Limit: 20Mpa (okanye 2900 psi; okanye 200kgf / cm2)
Density:. 0.7 ~ 0.8g / cm3 (.. 43 ~ 49.5lbs / mitran ft.3)
Matrix uqine: 30Mpa (4260 PSI)
Ukuphumla enyakanyakeni (ASTM F38): 51%
Previous: Desiccant Rotor Dehumidifier Seal
Enamathelayo Thread Seal Ptfe Tape
Ezimibala Ptfe ukutywina Tape
Ptfe Pipe ukutywina Tape
Ptfe ukutywina Tape
Ptfe Teflon Fibreglass Tape
Abicah Thread Seal Ptfe Tape
Teflon Tape Ptfe Umsonto Tywina
Kuhlohlwa ukutywina Ptfe Tape
Kakhulu Okwenziwe nylon Bolt and Nut
Grafayithi olugcwalisiweyo PTFE OEM Ring
Okwenziwe kakhulu nylon PA6 Ball
OEM enifunda Ring Seal
OEM Red Fibre-rubber uvalo